मन्त्री खनालद्वारा कंलकी मालपोत कार्यालयको छड्के, १४ बुँदे निर्देशन – Everest Dainik – News from Nepal
मन्त्री खनालद्वारा कंलकी मालपोत कार्यालयको छड्के, १४ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं, असार २७ । सेवाग्राहीको चर्को गुनासोपछि बुधबार अचानक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, सचिव गोपीनाथ मैनालीसहित मन्त्रालयको टोलीद्धारा कांलंकी मालपोत कार्यालयको अनुगमन गरेको छ ।
अनुगनपछि कृषिमन्त्री खनाले कार्यालय प्रमुखलगायतलाई १४ बुँदै निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनमा सेवाग्राहीका समस्या तत्काल समाधान गर्न र कार्यालयमा रहको अनावश्यक चाप कम गरी छिटो छरितो सेवा प्रभाव गर्न निर्दैशन दिएका हुन ।
मन्त्रीसहितको टोलीले फटाफक काम किन भएन र यति धेरै सेवाग्राहीको चाप किन भयो ? समाधान गर्ने उपााय के हुन् ? अव्यवस्थित किन ? एक जना सेवाग्राहीका पछि किन यति धेरै मान्छे लागेका छन् ? कित्ताकाटको पछिल्लो विवरण के छ ? सेवाग्राहीले आफै फर्म भर्न पाउने गरी सजिलो व्यवस्था के गर्न सकिन्छ ? माालपोत र नापीप्रति देशभरका जनतामा नकारात्मक छाप छ भन्ने भुल्न भएन । यो भ्रष्टाचारको अखडा हो, त्यहाँ कहिले पनि सुद्ध हुन्न भन्ने कुरालाई निमिट्यान्न पार्नु पर्छ सो बमोजिम काम गर्न कडा निर्देशन दिए ।
जवाफमा कार्यालय प्रमुखले सकेसम्म सेवाग्राहीलाई समस्या नपरोस र छिटो काम होस् भनेर काम गरिरहेका बताए । समस्या समाधानका लागि अहिले अनलाइनबाट फारम भर्ने र डकुमेन्टहरु इस्क्यान गरेर राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएका थिए । तर इक्यान गर्न धेरै समय लाग्दो रहेछ ।
आफू यसको सुधारका लागि योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको जानकारी गराएका थिए ।
ट्याग्स: kalanki, Mantri Khanal